India India - Onye nlegharị anya Bhubaneswar - 91-993.702.7574
Njem Ntugharị India
Njem Ntugharị India - Chọrọ ịchọta ebe ọ ga-aga? Ị na-ahụ agụụ anyị.
Kemgbe 1993, Sand Pebbles Tours nwere mgbe niile ụlọ ọrụ njegharị na India iji nye njem zuru oke na nke zuru oke India.
Ịhọrọ ebe ị ga-eleta bụ mkpebi dị mkpa. Ịchọta onye ọrụ nlegharị anya ziri ezi bụ mkpebi ka ukwuu. Gbalịa ka ị ghara ịga njem gị na ohere. Chọrọ ihe kacha mma ... Njem nlekọta ime mmụọ ma ọ bụ mmemme njem? Ihe oriri ezumike ma ọ bụ ihe nchịkọta nwa mpi? Anyị enwetala gị. Anyị nọ n'ebe ahụ iji nyere gị aka ịhụ nlele ahụ ma mee ihe ndị ị na-agaghị echefu.
Chọpụta ma nweta ahụmahụ kachasị mma na nke a na-apụghị imeri emeri nke ala ụlọ elu.
Obodo kachasi anya, ala nke omimi nke ugwu ugwu abughi ihe omuma ebe iga eleta na paradais apughi ikwuputa!
Na-enyocha India na ya na-atụgharị na panoramic ala ọnọdụ, ala ahịhịa juru, ubi tii na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Nyochaa ma na-enweta ebe ndị na-akpali akpali na gburugburu ụwa na ngwaahịa kachasị mma maka nchịkọta ụwa.
Mmekọrịta Ụlọ Ahịa
Dee ebe ị ga-esi na-eme njem nleta kachasị mma site n'ọtụtụ nchịkọta ezumike ntanetị dịnụ ma chọpụta ebe ndị na-akpali akpali na-aga India.
Ezigbo Wildlife - Njem Odisha
Were njem gaa na Lonavala - Khandala
A maara India na ọ bụ mba nwere ọtụtụ ọdịbendị omenala, ebe mara mma, ụlọ mara mma, na akụ zoro ezo. N'ebe ọwụwa anyanwụ India nke ala Odisha. Ihe niile ga-adọrọ uche gị ma chọọ ka ị rịọ maka ka anya gị jupụta na ịhụ.
Okwu Onye Ozo anyi
Sand Pebbles bụ ekele na-enweghị atụ n'ihi na ndị ahịa ya a ma ama bụ ndị mere ka anyị jiri okwu ha bara uru dị mpako. Chọpụta otú ndị ahịa anyị gburugburu ụwa si tinye Sand Pebbles n'ọrụ iji nwee ezumike ha na ndị ezinụlọ na ndị enyi ha wee wepụ ihe mgbochi ọhụụ nke LIFETIME.
Sand Pebbles bụ otu n'ime ndị ọrụ nleta kacha mma na Odisha. GỤKWUO..
Ọ bụ ahụmahụ na-echefu echefu na Sand Pebbles Tours na Njem. GỤKWUO..
Otu n'ime ahụmịhe kachasị mma ị nwere ike ịnweta na agba aja, GỤKWUO..
Njem Odisha na anyị
Ndụ bụ njem. Anyị kwenyere na njem ahụ nwere ike ịgbanwe ndị mmadụ n'ụzọ ndị a na-atụghị anya ya. Cheretụ oge na ụbọchị gị na-agwụ ike ile vidio a ma were onwe gị na Odisha.
Na-ebi ndụ, mụta ihe, chọpụta na ịma mma niile dịnụ iji chọpụta. Bịa ma nwee obi ụtọ na ịma mma ọ bụla na Luxury Tours India site na ọdịbendị ọdịbendị mara mma na ụlọ ndị mara mma na ọbụna nlegharị anya, nwee ọhụụ dị ọcha ka anyị na-eme njem nlegharị anya.